Ngubani uLindsay Schweitzer? Konke malunga nomlingane ka-Eric Stonestreet - Inkcubeko
Ngubani uLindsay Schweitzer? Konke malunga nomlingane ka-Eric Stonestreet
Ugqirha kunye nohlekisayo u-Eric Stonestreet kutshanje ubhengeze ukubandakanyeka kwakhe kumlingane uLindsay Schweitzer I-Instagram Iposti ngo-Agasti 22. Iindaba zaqinisekiswa NGABANTU. U-Eric Stonestreet wabelane ngoludwe lwemifanekiso ebonisa umsesane. Incazo ithi,
Uthe, 'Unabantu bakhe ababize abantu bam.
Inkqubo ye- Usapho lwale mihla Umdlali weqonga ubonise iichops zakhe zokubonisa, ebonisa iimvakalelo ezahlukeneyo kwi-carousel. USchweitzer wabonwa encumile njengoko esi sibini sibeka imifanekiso ngelixa sihleli kunye etafileni.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu-Eric Stonestreet (@ericstonestreet)
ukuba ubudlelwane bakho kufuneka bube yimfihlo
ABANTU baqale baxela ukuba iStonestreet yayikhona ukuthandana USchweitzer ngo-2017 emva kokudibana naye kwi-Big Slick charity ngempelaveki eKansas City ngo-2016. Esi sibini sabuliswa ngabahlobo baso kunye namalungu osapho emva kwesibhengezo kubandakanya uZachary Levi, uHillary Scott, uMichael Bublé, uVernon Davis, uWill Sasso, kunye noBethenny Frankel .
U-Eric Stonestreet wade waphalaza iimbotyi malunga nentombi yakhe ngelo xesha uLindsay Schweitzer ku-Ellen DeGeneres ngelixa wayevela kumdlalo wakhe ngo-2017. U-Ellen waqhula esithi intombi yakhe ngumntu othandekayo noya kuncoma u-Eric kakuhle, kuba ungumntu o-hypochondriac. Umthombo uxelele ABANTU ukuba bonwabile ngokudibana kwaye bonwabele ukuchitha ixesha kunye.
Ngubani umlingane kaEric Stonestreet?
U-Eric Stonestreet kunye nomlingane uLindsay Schweitzer (Umfanekiso nge-Instagram / ericstonestreet)
ULindsay Schweitzer ngumlingane kaEric Stonestreet kwaye ungumongikazi wabantwana. USchweitzer waya kwi-premiere ye- Ubomi obuyimfihlo bezilwanyana zasekhaya 2 Ngo-2019 apho uEric waveza khona isimilo sikaDuke. Umlingisi oneminyaka engama-49 uphumelele amabhaso amabini e-Emmy ngendima kaCameron Tucker kwii-ABC's Usapho lwale mihla .
USchweitzer waqala ukuthandana neStonestreet kwi2017 kwaye baqala ukudibana kwimpelaveki enkulu yesisa yaseKansas City. U-Ellen DeGeneres uxelele umdlali weqonga kwinyanga ephelileyo ukuba intombi yakhe 'iyathandeka', waphendula uStonestreet esithi ulusana olukhulu kwaye upholisa imithambo-luvo yakhe.
Ngaphandle kokuthandana nosaziwayo odumileyo wescreen esincinci, uLindsay uhlala kakhulu kwindawo ebonakalayo, ngaphandle kokuya kwiminyhadala ebomvu ebomvu noEric.
imiqondiso abantu abasebenza nabo bayatsala
Inkqubo ye- Ibali laseMelika laseMelika Umdlali weqonga uthi udlala imidlalo emininzi kwintombi yakhe kwaye uhlala ekwabelana ngemifanekiso yakhe kwi-Instagram. U-Eric utyhile ku-Twitter ngo-Matshi 2021 ukuba yena noLindsay bazokunikela ngokutya okungama-200,000 kubavuni, ngumbutho ondla abantu abadinga eMissouri naseKansas.
Funda kwakhona: Ngubani 'owayemnandi' uConnie Hamzy? Iqela le-Rock bandy eyaziwa ngokuba yi-'Grand Funk Railroad 'hit hit in 66
Nceda i-Sportskeeda iphucule ukuhanjiswa kwayo kweendaba zenkcubeko. Thatha uvavanyo lwemizuzu emi-3 ngoku.
ukudibana phi ngomhla wokuqala
Kutheni ndilila xa ndinomsindo
ukunika indoda indawo yokujonga izinto
lil lil uzi vert ufile
kufuneka wenze ntoni xa utyholwa ngobuxoki ngokukhohlisa